Waxyeellada, Walafka Iyo Waraabaynta Wasiirka Waxbarashadu Qiil Ma Leh!
Monday January 09, 2017 - 14:06:17 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Waxa ay ahayd badhtamihii bishiiDisember 2016ka markii ay Xisbiga WADDANI dammaanad-qaadeen waxbarashada carruurta qoys ubadkooda laga soo eryay dugsiyada dawladda, kuwaas oo aabbahoodna yahay askari ku maqan furinta hore ee Gobolka Sool. Waanu ku bogaadinaynna masuuliyadda ay dusha u riteen xisbiga WADDANI, waayo waxa ay culays ka furteen qoys muwaaddiniin ah oo dhabarkooda la saaray culays aanay qaadi karin.
Waxa se ayaan-darro ah in uu tallaabadan sas iyo salal ka qaaday ninka ku magacaaban Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Somaliland Cabdillaahi Ibraahin Habbane (Cabdillaahi Dheere), oo eed iyo af-legaaddo isugu daray hooyadii iyo carruurtii dhibbanayd"Gabadhaas iyo carruurteedu way isku shaqaystaan. Miyay Guddoomiyaha Gobolka u yimaaddaan haddii dugsiga laga soo ereyay” ayaa ka mid ahaa weedhihii qaawanaa ee ku weeraray hooyada iyo ubadkeeda, isaga oo ka dhigaya kuwo ku dawarsada in dugsiyada laga soo eryay.
Haddaba Cabdillaahi Dheere waxa aan u sheegayaa in lacagta laga qaado dugsiyada hoose/dhexe ee Somaliland ay soo martay heerarkan
1997: 2000 SL/SH
2000: 5000 SL/SH
2010: 7000 SL/SH
Iyada oo ardayda laga qaado 7000 SL/SH ayuu KULMIYE talada la wareegay, waxaanu si aan laga fiirsan u sheegay in bilaash laga dhigay dugsiyada dawladda, taasi waxa ay sababtay in ay shaqada ka tagaan macallimiin badan oo aan gunnada dawladda qaadan jirin. Isla markaana ay ku sigtaan in albaabbada loo laabo dugsiyada dawladda.
Markii ay dhawr bilood lacag la’aan ahaayeen iskuuladdu waxa la soo rogay in Khamiista ardayda laga qaado 3000 SL SH oo lagu magacaabay nadaafad, taas oo wadarta lacagta bisha la qaado ka dhigaysa 12,000 SL SH. Imakana waxa waajib in dugsi kastaaba uu ardayga ka qaado 17,000 SL SH, waa lacag laba jeer iyo dheeraad ka badan intii la qaadi jiray xilligii UDUB.
Lama odhan karo Wasiir Cabdillaahi Dheere kama war hayo lacagtan miisaanka leh ee ay maamuleyaasha iyo macallimiintu gurtaan, laakiin indhaha ayuu iska soo ridayaa. Ku darso, iskuullada bilaashka lagu sheegayaa waa waxqabadyada ugu waaweyn ee ay sheegtaan Xukuumadda iyo Xisbiga uu Cabdillaahi Dheere ka tirsan yahay ee KULMIYE.
Masuulkan waxa aanu leennahay haddii uu dherigaagu cad iyo feedho yahay, ha ku wiirsan maxasta iyo maatida Somaliland ee aad masuulka u tahay. Waxa aanu ugu baaqaynnaa in uu u kuurgalo xaaladaha rasmiga ah ee ka jira dugsiyada uu dawladda masuulka ugu yahay.
Ugu dambayntiina waxa aanu xaal iyo raalli-gelin siinaynnaa cid kasta oo dhibsatay deelqaafka Wasiir Cabdillaahi Dheere, si gaar ah waxa aanu xurmo u huwinaynnaa hooyadii uu Cabdillaahi Dheere calyada ku saydhay oo aanu leennahay "ma geydid dulmiga iyo af-xumada, hooyo gob baad tahaye dulqaado”.
Maxamed Aadan Jaamac
Xoghayaha Dalladda Bareyaasha Qaranka Somaliland